Fegharị na Abu Dhabi na Casablanca na Style Dreamliner
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Fegharị na Abu Dhabi na Casablanca na Style Dreamliner
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Morocco • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Etihad Airways, ụgbọ elu mba nke UAE, na-akwalite ọrụ ndị a ma ama na Morocco iji gboo mkpa dịwanye na ya site na ọnụ ụzọ ámá abụọ ya na alaeze North Africa.
Site na 1 Mee, a ga-ewebata klas Boeing 787-9 Dreamliner nke klas atọ kwa ụbọchị site na Abu Dhabi ruo ebe azụmahịa nke Morocco, Casablanca. Aircraftgbọ elu ndị elu na nkà na ụzụ na-egosipụta 8 Suites mbụ, 28 Business Studios na 199 Economy Smart Seats.
Iwebata nke 787 Dreamliner ga-ahụkwa usoro nhazi oge nke ga-ebuli oge maka ndị ahịa na-aga ma si na Casablanca. Etihad Airways ga-ejigide ụtụtụ n'isi ụtụtụ wee banye na Casablanca wee rụọ ọrụ ọrụ ịlaghachi azụ nke ụtụtụ nke ga-eme ka njikọta na ntanetị zuru oke nke ebe gụnyere Singapore, Kuala Lumpur na Tokyo.
Etihad Airways 'Morocco ọrụ ugbu a na-enwe a n'ihu agbam ume na nke atọ kwa izu ọrụ na Moroccan isi obodo, Rabat. Mgbakwunye ụgbọ elu ahụ ga-arụ ọrụ na Satọde ruo mgbe 12 Mee, yana site na 30 June ruo 29 Septemba iji nweta ọnụ ọgụgụ dị elu nke oge okpomọkụ, na-eji ọkwa atọ Airbus A330-300. Agbakwunyere ụgbọ elu ọzọ iji nyekwuo nhọrọ maka ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke oge ntụrụndụ na ndị njem azụmahịa n'etiti UAE na Morocco, na-eme ka ogologo akụkọ ihe mere eme nke azụmahịa na imekọ ihe ọnụ n'etiti mba abụọ ahụ.
Etihad Airways enweela mmekorita codeshare na Royal Air Maroc (RAM) kemgbe Mee 2007. N'okpuru nkwekọrịta ahụ, Etihad Airways tinye akara 'EY' ya na ọrụ ụgbọelu Moroccan si Casablanca ruo Agadir, Marrakech na Tangier. Na-echere nkwado gọọmentị, Etihad Airways ga-etinyekwa aka na ọrụ Royal Air Maroc site na Casablanca ruo Abidjan na Ivory Coast, Conakry na Guinea, na Dakar na Senegal.
Royal Air Maroc codeshares na Etihad Airways na-efega Morocco, na-etinye koodu 'AT' ya na ọrụ Etihad site na Abu Dhabi na Casablanca na Rabat.
Female 1 Mee 2018 (oge mpaghara):
Gbọ elu Mba Mmalite Hapụ Ebe Abịa Aircraft Frequency
NXU 613 Abu Dhabi 02: 45 Casablanca 08: 10 Boeing 787-9 Daily
NXU 612 Casablanca 09: 55 Abu Dhabi 20: 25 Boeing 787-9 Daily
Abu Dhabi - Rabat oge:
NXU 615 Abu Dhabi 10: 40 Rabat 16: 00 Airbus A330 Wenezde, Fraide
NXU 616 Rabat 19: 10 Abu Dhabi 05: 50 Airbus A330 Wenezde, Fraide
* EY615 Abu Dhabi 10: 40 Rabat 16: 00 Airbus A330 Saturday
* EY616 Rabat 19: 45 Abu Dhabi 06: 25 Airbus A330 Saturday
* na-egosiputa ụgbọ elu ndị ọzọ - naanị rụọ ọrụ 31 Machị ruo 12 Mee na 30 June ruo 29 Septemba